Fanakaingoana loko ny lakozia - Kitchen Cabinets Color Combination
Home Fanakaingoana loko ny lakozia
Ny lakozia no teboka manan-danja indrindra ao an-tranonao; na ho an’ny fahafaham-po omenao, toy ny resale. Noho izany, ny fisafidianana ny alokaloka mety ho an’ny kapoaky ny lakozia. Betsaka ny mamerina mandrafitra drafitra na misafidy drafitra izay mampiditra ny lakozia ao amin’ny faritra mahazatra, ary matetika dia tsy misy faritra manokana an-dakozia / fihinana / parlor. Ny fisafidianana biraon’ny fizaram-bidy dia fizarana lehibe amin’ny fametrahana ny toeran’ny saina sy ny fanaovana fahafinaretana ao amin’ny efitranonao ilaina. Aoka ianao ho toy ny mety, ny fisafidianana aloka marina ho an’ny lakozia anao dia sarotra be lavitra noho izay mety ho nantenain’ny olona iray. Io dia manery ny tompona fananana hifidy ny Vanilla.
Maninona ianao no tokony handinika loko amin’ny alàlan’ny kabine tsy an’ny antoko
Ireo tompon-trosa matetika tsy sahy mieritreritra any ivelan’ny tsy momba ny neutité (hamorona bilaogy amin’ny fomba mahomby indrindra aho mba hisafidy ny fampidirana kapoaka tsy misy dikany tsy misy dikany) satria matahotra izy ireo dia mety hisy fiantraikany amin’ny famerenam-bidy indray. Manelingelina azy ireo amin’ny takelaka kapoaka an-dakozia vokatry ny maha-zava-dehibe ny lakozia iray manavaka ny fivarotana trano. Eny tokoa, ny lakozia no eritreritra lehibe indrindra ho an’ny mpividy.
Imbetsaka ny mpivarotra no saika fa tsy an-dry zareo manao trano an-trano be dia be fa ho be zotom-po kokoa izy ireo. Ny fisaintsainana mahazatra dia handresy lahatra fa ny mpividy mety ho mora kokoa ny vidin’ny mpivarotra. Na izany na tsy izany dia tsy manadino ny fiheverana ny habetsaky ny fandraisana anjara azo eny an-tsena izy io izay mampiasa ity fomba fiasa mifamatotra ity. Ny fahamarinan’ity raharaha ity dia ny hoe tsy mitanila loatra fa midika izany fa raha toa ka hisy fisian’izay mety hividy mpividy dia ho betsaka ny safidy toa izany.
Ny drafitra lehibe dia drafitra lehibe; ary ny fitadidiana fa ny hues isan-karazany dia hiresaka amin’ireo olona vitsy kokoa izay hiresaka amin’ireo olona ireo amin’ny ambaratonga lalina kokoa. Ho azonao atao koa ny manapa-kevitra manohitra ny safidin’ny olona tsirairay; ary izany no fomba ivarotanao ny tranonao fanampiny.
Ny tena zava-dehibe dia ny hoe mankahala ny lakoziao ianao ka misafidy aloka ary mamita izay manome hery anao. Ataovy izay hanaovana ny tsara. Ny fizarana rehetra dia tokony mivoatra manaraka ny tanjon’ny rafitry ny firafitra. Ny firafitra lehibe dia mamatotra miaraka amin’ny fandehanana an-tongotra, mitondra fiara, ary mikapoka amin’ny fikatsahanao ny volanao manokana.
Teboka mahaliana rehefa misafidy loko ho an’ny kabinetra an-dakozia
Amin’ny tranga maro dia manambara izahay fa “ny trano misafidy ny” shading “ary ny safidy shading lehibe dia mihamalalaka hatrany amin’ny fitrandrahana aloka, na inona na inona toe-javatra rehefa manomboka aloha ny fomba.
Diniho ireo zavatra tsy hiova. Angamba ianao mankafy ny fantsom-baravarankely / famafazana ankehitriny ary ny fitrandrahana miditra, na misy asa vita amin’ny stonework na biriky ao amin’ny efitrano ifandraisana. Tokony hisafidy shading ianao izay hidera ireo fametrahana tsy miova. Tsy maintsy fantatrao ny fiantraikan’ny fahazavana eo amin’ny efitrano amin’ny aloky ny mpisaraka. Fahitana jiro ve izany?
Mamirapiratra? Fluorescent? Mifangaro roa ?. Ny jiro dia hisy fiantraikany amin’ny fomba hisehoana, ary hiova ny fisehoana mandritra ny andro sy ny alina rehefa miova ny fifangaroan’ny jiro.
Manaova fanazaran-tena amin’ny fomba tsy azo tanterahina mba hanomezana anao tranga lehibe momba ilay aloka.
Amin’izay fotoana izay dia mety ho efa azonao fa ny iray amin’ireo fomba fanta-daza hanova tanteraka ny lakozia (ary avy amin’ny fomba fijery samihafa ny tranonao) amin’ny alàlan’ny fandokoana ny kapoaky ny lakozia. Hafahafa sahabo 10 taona talohan’izay talohan’io fa ny sarety maple sy hazo oaka namboarina no noheverina ho fanta-daza indrindra nefa na izany aza ny fanaovana hosodoko dia nitodika haingana tamin’ny fenitra.
Izahay dia mamerina ny tabilao be an-dakozia (ary ny lalamby mandro, sy ny sisa) ao amin’ny faritra Cleveland, OH ary iray amin’ireo fanontaniana be mpahalala azontsika dia ny zavatra mihodinkodina. Ity misy ampahany amin’ny modely tiantsika (avy amin’ny asantsika manokana) miaraka amin’ny fanazavan-tena ahafahanao misafidy izay tena mahasoa amin’ny tranonao. Raha tsy mampaninona anao ny mitadidy, rehefa misintona sary miloko misy dikany izay ny ankamaroan’ny zavona samihafa ao amin’ny efitrano dia misy fiantraikany tsara indrindra. Ny fironana iray dia toa tsy dia mampino any amin’ny lakozian’ny olon-kafa nefa tsy ao aminao.
Kitapo fotsy amin’ny lakozia fotsy
Ny fotsy dia ilay fampisehoana malaza indrindra toy ny efa tao anatin’ny fotoana dimy taona na any amin’ny faritra manodidina. Ny antony iray fotsy dia ny fampandehanana arak’asa mahazatra no antony mahatonga ny ankamaroan’ireo fantsom-piainana samihafa ao amin’ny pop an-dakozia, (ohatra, ny mpizara sy ny mpanisa). Ny kaofila vita amin’ny fotsy miloko dia mety mahatonga ny lakozia jiretsy toa lehibe kokoa toa ny sary hoso-doko amin’ny mpizara.
Cabinets misy volo fotsy loko / menaka
Ny biraon’ny birao faharoa malaza indrindra dia volondolo na menaka. Ao amin’ny trano maro dia maro tokoa ny fandokoana fotsy mamirapiratra amin’ny kapoaka an-dakozia. Izany dia matetika ny toe-java-misy raha ny volo-sisa ny tsipika ao an-trano dia mamontsina na raha ny fatiantoka na ny tany eto an-dakozia dia eo amin’ny faritra mafana amin’ny alokaloka. Ohatra, raha toa ka manana loko miloko maizina na mavo ny kaontinao, amin’izany fotoana izany dia ny fofona mavo dia mety ho fiderana miavaka.
Ny fihetsika mampihomehy dia mahavariana (ary toa mamiratra kokoa aza) ao amin’ity lakozia ity noho ny fihetsika samihafa. Koa satria alokaloka maitso ny mpizarazara ary manana lamosina maizina miloko maizina ny lamosina, dia mankasitraka azy ireo tsara ny volo mena.
Hoso-doko volafotsy cabinets Grey
Dim no maha-fianakaviana malaza fanta-daza amin’ny fandokoana mpizara, na izany aza no fametahana tsara indrindra amin’ny kapoaky an-dakozia? Izy io dia azo antoka fa fanapahan-kevitra malaza na izany aza dia toa somary malaza kokoa noho ny fotsy sy ny fotsy volo. Toy izany koa amin’ny fandokoana dia miantehitra amin’ny sisa amin’ny haingoo tahaka ny gorodona sy ny rindrina ihany. Ny maizina sy ny haizim-pito dia samy malaza amin’ny kitapo. Ny vovoka malemy dia mety ho maranitra amin’ny takelaka kely fotsiny, ohatra, ny hoso-doko amin’ny nosy na ny takelaka ambany ambany izay mitodika.
Cabinets manga vita amin’ny loko manga
Raha toa ka manana miloko fotsy sy fotsy ao an-dakoinao ianao ankehitriny, ny safidy mahomby amin’ny fandokoana ny kapoakanao dia mety ho hery manga mihena. Ity dia mety tsara indrindra amin’ny ampahany kely amin’ny kaopy fotsiny fa tsy ny tsirairay amin’izy ireo dia mety ho tsindriana mahafinaritra sy manondro ny fivadihana. Ity dia tsy isalasalana fa tsy ho an’ny rehetra ary voafatotra tsy ho fantatra amin’ny 5 taona na izany aza na izany aza amin’ny ankehitriny (amin’ny taona 2018) dia safidy efa misy toa azy io.
Fotsy maitso ho an’ny kabinetra an-dakozia
Ny safidy iray aloka farany aseho dia alokaloka maitso. Toy ny manga manga hery, ity dia safidy misongadina kokoa izay miasa irery ao amin’ny trano manokana. Ity famokarana ity dia mety hiasa ao an-trano miaraka amin’ny feo mafana kokoa, ohatra, ny alokaloka amin’ny beige. Izy io koa dia azo inoana fa miasa tsara indrindra miaraka amin’ny be noho ny volo manankarena fa tsy fotsy miharihary.
Mety tsara amin’ity lahatsoratra ity ny mamolavola kaopy amin’ny kaopy amin’ny lakozia. Misy otrikaretina mahaliana maro azo idirana ary ny tsara indrindra aminao dia tena miankina amin’ny tsirony sy ny loko isan-karazany ao an-dakoinao. Raha tranga ao amin’ny faritra Cleveland ianao dia maniry ny hiresaka aminao ny momba ny fandokoana ny kapoaky ny lakozia. Azonao atao ny mahafantatra ny fomba fanaovanay ao amin’ny pejin’ny sary hosodoko Kabinetra.